နောကျတဈခါထပျခဈြရမှာကို ကွောကျလာတတျတယျ – Shinyoon
January 28, 2021 by Shin Yoon
တဈခါနာကငျြခဲ့ရပွီးတော့ နောကျတဈခါထပျခဈြရမှာကို ကွောကျလာတတျတယျ
အခဈြ … ပထဆုံးဖွဈတညျလာတဲ့အခဈြမှာ ရငျဘတျနဲ့ရငျးခဲ့မိတာကိုတော့ ဝနျခံပါတယျ ဒါပမေယျ့ အခဈြကံမကောငျးခဲ့တာလား ကိုယျပဲ ဉာဏျနညျးခဲ့တာလားမသိပါဘူး အလိမျအညာကိုမှ တကယျအတညျကွီး ထငျနခေဲ့မိတာလေ …
ပထမဆုံးအခဈြ … ကိုယျ့ထကျပိုပွီးခဈြခဲ့မိသလို ဒီလကျကို စပွီးဆှဲကတညျးက ဒီလူနဲ့ ဒီတဈသကျ အိုမငျးသှားခငျြတယျ ဆိုတဲ့အတှေးရှိခဲ့ဖူးတယျ … ဒါပမေယျ့ မတညျမွဲခွငျးတှထေဲမှာ သူ့အခဈြတှကေ ထိပျဆုံးက ပါနခေဲ့တာလေ … ကိုယျ့ဘကျက အစဈတှေ ပေးခဲ့ပမေယျ့ အစဈတှပွေနျမရခဲ့ဘူး
နာကငျြရတယျ ကွကှေဲရတယျ … အဲ့လိုနာကငျြသှားရပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ နောကျထပျ ထပျခဈြရမှာကို သိပျကို ကွောကျသှားခဲ့တယျလေ … အဲ့လိုထပျပွီးမြားနာကငျြရရငျဆိုတဲ့ ကွောကျစိတျကွီး စှဲသှားခဲ့တယျ ဒီတဈခါထပျနာကငျြရရငျ ကိုယျခံနိုငျရညျ ရှိနိုငျတော့မယျလဲ မထငျတော့တာလဲပါတာပေါ့ … ကိုယျ့နာကငျြမှုကို ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ သိပါတယျ
အစှဲအလမျးကွီးတတျတော့ ပိုဆိုးတယျလေ … မခဈြတတျတော့တာမဟုတျပဲ နောကျထပျခဈြရမှာကို ကွောကျတတျလာရုံပါ ကိုယျ ပုံအောပွီး ခဈြမိလိုကျတဲ့သူဆီက ပွနျရလာတဲ့ ဒဏျရာကိုပွလို့ရရငျ ပွခငျြမိတယျ တခြို့ကတော့ ရူးလိုကျတာလို့ပွောခငျြပွောကွလိမျ့မယျ ကွုံခဲ့ဖူးတဲ့သူမှသာ နားလညျမယျ့ ဒဏျရာတှပေေါ့
အခဈြနဲ့ပတျသကျပွီး နာကငျြခဲ့ရပွီးတော့ ကိုယျ့မှာ နောကျထပျ ထပျခဈြဖို့ကို တဖွေးဖွေး ကွောကျကွောကျလာတယျ … ဒီလိုနဲ့ပဲ တဈယောကျတညျးနဖေို့ တှေးခဲ့တာပါ .
တစ်ခါနာကျင်ခဲ့ရပြီးတော့ နောက်တစ်ခါထပ်ချစ်ရမှာကို ကြောက်လာတတ်တယ်
အချစ် … ပထဆုံးဖြစ်တည်လာတဲ့အချစ်မှာ ရင်ဘတ်နဲ့ရင်းခဲ့မိတာကိုတော့ ၀န်ခံပါတယ် ဒါပေမယ့် အချစ်ကံမကောင်းခဲ့တာလား ကိုယ်ပဲ ဥာဏ်နည်းခဲ့တာလားမသိပါဘူး အလိမ်အညာကိုမှ တကယ်အတည်ကြီး ထင်နေခဲ့မိတာလေ …
ပထမဆုံးအချစ် … ကိုယ့်ထက်ပိုပြီးချစ်ခဲ့မိသလို ဒီလက်ကို စပြီးဆွဲကတည်းက ဒီလူနဲ့ ဒီတစ်သက် အိုမင်းသွားချင်တယ် ဆိုတဲ့အတွေးရှိခဲ့ဖူးတယ် … ဒါပေမယ့် မတည်မြဲခြင်းတွေထဲမှာ သူ့အချစ်တွေက ထိပ်ဆုံးက ပါနေခဲ့တာလေ … ကိုယ့်ဘက်က အစစ်တွေ ပေးခဲ့ပေမယ့် အစစ်တွေပြန်မရခဲ့ဘူး
နာကျင်ရတယ် ကြေကွဲရတယ် … အဲ့လိုနာကျင်သွားရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ နောက်ထပ် ထပ်ချစ်ရမှာကို သိပ်ကို ကြောက်သွားခဲ့တယ်လေ … အဲ့လိုထပ်ပြီးများနာကျင်ရရင်ဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ်ကြီး စွဲသွားခဲ့တယ် ဒီတစ်ခါထပ်နာကျင်ရရင် ကိုယ်ခံနိုင်ရည် ရှိနိုင်တော့မယ်လဲ မထင်တော့တာလဲပါတာပေါ့ … ကိုယ့်နာကျင်မှုကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိပါတယ်
အစွဲအလမ်းကြီးတတ်တော့ ပိုဆိုးတယ်လေ … မချစ်တတ်တော့တာမဟုတ်ပဲ နောက်ထပ်ချစ်ရမှာကို ကြောက်တတ်လာရုံပါ ကိုယ် ပုံအောပြီး ချစ်မိလိုက်တဲ့သူဆီက ပြန်ရလာတဲ့ ဒဏ်ရာကိုပြလို့ရရင် ပြချင်မိတယ် တချို့ကတော့ ရူးလိုက်တာလို့ပြောချင်ပြောကြလိမ့်မယ် ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့သူမှသာ နားလည်မယ့် ဒဏ်ရာတွေပေါ့
အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နာကျင်ခဲ့ရပြီးတော့ ကိုယ့်မှာ နောက်ထပ် ထပ်ချစ်ဖို့ကို တဖြေးဖြေး ကြောက်ကြောက်လာတယ် … ဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်ယောက်တည်းနေဖို့ တွေးခဲ့တာပါ .
တဈခါလောကျတော့ သတိရပေးပါ …